RW Saacid ?Tacsi ayaan u dirayaa qowsaska muhaajiriinta dhintay dhalintu ha joojiyeen tahriibka? – Radio Daljir
Oktoobar 5, 2013 4:02 b 0
Muqdisho, October 5, 2013 – Ra?isal wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa tacsi u diray ehelada ay ka dhinteen dhalinyaradii ku le?day xeebaha jaziirada Lampedusa ee dalka Talyaaniga, halkaas ay ku degtay doon siday ilaa 500 oo ruux oo muhaajiriin ah.
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska ra?isal wasaaraha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay aad uga naxday geerida ku timi muhaajiriinta Soomaalidu ku jirto, waxaa uu ra?isal wasaaruhu dhalinta ugu baaqay in ay joojiyaan tahriibka oo uu ku sifeeyey faa?iido la?aan.
? Xukuumadu waxay ahmiyad siin doontaa waxbarashada iyo shaqo abuurka dhalinyarada, tacsi ayaan u dirayaa qowsaskii ay ka geeryoodeen dhalinta Soomaalida ah.? Ayuu yiri ra?isal wasaare Saacid.
Ra?isal wasaaraha ayaa xusay in dhalinta Soomaalida shaqo loo abuurayo, waxaa uu muujiyey muhiimad wayn in aysan lahayn in dalalka debeda loo haajiro wakhtigan, ra?isal wasaaraha ayaa tusaale u soo qaatay qurba-joogta dalka ku soo noqonaya si ay faa?iido u dhaliyaan.
130 u badan Soomaali iyo Eretrian ayaa la sheegay in ay dhinteen, 150 waa la badbaadiyey iyagoo nool ilaa haddase waxaa la baadi goobayaa 200 oo kale, in kastoo howl-galka uu hakad ku yimi kadib markii ay ciidamadu sheegeen in ay baddu aad u kacsan tahay oo aan la geli karin.